China CY-8 (Toilet rack) vagadziri uye vanotengesa | Jialong
Mamiriro akanaka ezuva anotanga nekamuri yakachena
1, Yakasarudzika dhizaini dhizaini, yakanaka, ine rupo, inoshanda, mune pombi yesimbi uchishandisa yepamusoro pevhu tekinoroji, yakadzikama panguva imwe chete yekuvandudza iyo inobereka kugona, kuisa zvinhu zvakachengeteka.
2, Iko kushandiswa kweakakosha pamusoro peyese tekinoroji, hupenyu hwakareba hwebasa, isina mvura uye yakasimba, isiri nyore kuita ngura, inokodzera kuchenesa zuva nezuva uye kuchenesa.
3, Kunyange pasherufu yetsika yepurasitiki yakachipa, inotora nzvimbo uye inongokodzera nzvimbo dzechinguva dzakadai sedzimba dzekurenda. Yedu masherufu yetoilet inogona kuiswa kuseri kwechimbuzi, icho chinogona kushandisa nemazvo nzvimbo isingagone kushandiswa panguva dzakajairwa uye kuita kuti chimbuzi chisazonetseke.
4, Kushandiswa kwetatu-rukoko bhakoro mhando simbi ndiro inowedzera nzvimbo yekushandisa uye inowedzera kubereka kugona.
5, Adjustable sikuruu tsoka nepanhovo zvinogona zvinobudirira kudzivirira skid, uye anogona kugadzirisa kukwirira zvemasanga maererano chaiko ezvinhu, zvinobudirira tichidzivisa kugadzikana kuzununguswa.
Kuisa chinzvimbo:Floor mhando shefu, isina kuchera, kudzivirirwa kwematiles, padyo nemadziro zvakachengeteka.
Mhinduro yevatengi:Nekuda kwemhinduro kubva kuvazhinji vatengi, hoko yesimbi katatu iri nyore kupwanya panguva yekufambisa nekuda kwehuwandu hwayo hukuru. Kuti tidzivise chirauro kubva pakupwanya zvakare uye kukanganisa chiitiko, matatu akakora epurasitiki zvikorekedzo zvinoshandiswa, uye pepa tauro chirauro zvakare yakasimbiswa epurasitiki chirauro.
Uine patent, mhando yakanaka ndeyechokwadi.
Vashandisi veimwe yekupfura mhenyu, ivo vanoshanda chaizvo uye vari nyore kune yedu chimbuzi masherufu logo
Kutakura:Chimwe nechimwe chezvigadzirwa zvedu chinotora yakazvimiririra kurongedza, uye iro bhokisi rekuputira rinogamuchirawo maitiro Iwe unogona kutibata isu zvakananga, uye isu tichazvigadzirisa maererano nezvinodiwa nevatengi vedu.
Pashure: CY-9 (Washing muchina pani)
Zvadaro: CY-7 (Aluminium hanger)